Raysal Wasaarayaashii Hore Farmaajo Iyo Nuur Cade Oo Shacabka Soomaaliyeed Ugu Hanbalyeeyay 1 Luuliyo
Raysal wasaarayaashii hore ee wadanka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo waliba
Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade oo la hadlay warbaahinta ayaa shacabka Soomaaliyeed
u diray hanbalyo ku aadan munaasabada 1 luuliyo.
Maxamed c/laahi maxamed farmaajo Raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay
in shacabka Soomaaliyeed uu ugu hanbalyaynayo maalintaan qiimaha weyn.
Sidoo kale wuxuu sheegay in loo baahanyahay in shacabka Soomaaliyeed ay isku tashadaan
isla markaana ay ka fikiraan aayahooda.
Farmaajo ayaa wuxuu sheegay in maalintaan oo kale ay ka mitahay maalmaha ugu qiimaha
badan dadka Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in sida ay yihiin loo weynayo in ay
Sidoo kale Raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya nuur Xasan Xuseen Nuur cade oo asna
jooga wadanka Talyaaniga ayaa umada Soomaaliyeed wuxuu ugu hanbalyeeyay
maalintaan qiimaha weyn ee 1 luuliyo.
1 luuliyo 1960 ayay ahayd markii ay dadka Soomaaliyeed eek u noolaa koofurta
Soomaaliya ay ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga, isla markaana ay isku biireen
gobaladii Waqooyi iyo kuwii koofureed.
DKMG ah oo Maalmo kooban u Qabatay Inay Isku Diiwaangeliyaan Shirkadaha Isgaarsiinta iyo Warbaahinta Madaxa Bannaan
Wareegto ka soo baxday wasaaradda warfaafinta xukuumadda KMG Soomaaliyaayaa mudo shan
maalmood oo kaliya loogu qabtay inay isku soo diiwaangeliyaan shirkadaha
isgaarsiinta, Internetka, iyo warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha
Soomaaliya oo dhan.
Hadaba Wareegtada ayaa u qorneed sida tan.
WASAARADDA WARFAAFINTA, BOOSTAHA IYO ISGAARSIINTA
Xafiiska Waaxda Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada
Ujeedo: Wargelin Taariikh; 30/06/2012
- Iyadoo la fulinaayo siyaasada guud ee Wasaarada Warfaafinta, Boostada &
Isgaarsiinta ee la xiriirta ilaalinta nidaamka adeegyada Isgaarsiinta,
Warbaahinta iyo Internet-ka, beekhaaminta ilaha dabiiciga ah ee Hirarka
Isgaarsiinta ee kooban, dhiiragalinta ganacsiga furfuran iyo tartanka suuqa ee
dhamaan Shirkadaha soo bandhiga adeegyada Isgaarsiinta, Teknoolajiyada
Internetka iyo Warbaahinta.
- Iyadoo Wasaaradu ku howlantahay wax ka qabashada cabashooyin isi soo taraya oo
ku saabsan istcimaal sharci daro ah ee qeybo ka mid ah Hirar-Raadiyaha,
Lambarada Isgaarsiinta Soomaaliya.
- Iyadoo loo hogaansamayo qodobka (26aad) ee Sharciga Isgaarsiinta Qaranka ee
qeexaya in shirkad iyo shakhsi uusan ku shaqeysan karin ama bixin karin adeeg
Isgaarsiineed, Inernet, iyo Warbaahin iyadoo la isticmaalayo Hirarka
Isgaarsiinta ee Raadiyaha haddii uusan Ruqsad (License) ogolaansho ka heysan
Haddaba waxaa la farayaa dhamaan Shirkadaha iyo Shakhsiyaadka qabta adeegyadaas kor ku
xusan ee aan haysan Ruqsadaha shaqo in ay la soo xiriiraan Waaxda Isgaarsiinta
& Tiknoolajiyada ee Wasaarada si ay isku diiwaan galiyaan, una helaan Ruqsad
si waafaqsan sharciga ka hor maalinta Khamiista ah ee ay taariikhdu tahay
Ciddii aan u hogaansamin amarkan kor ku xusan waxaa laga qaadi doonaa talaabo sharciga
Waaxda Isgaarsiinta & Teknoolajiyada.
Wasaarada Warfaafinta, Boostada & Isgaarsiinta
Muqdisho Oo Si Weyn Looga Xusay 1 Luuliyo
Munaasabadaan ayaa waxa asoo qaban qaabiyay dowlada Soomaaliya waxaana ka soo qaybgalay
dadweyne masuuliyiin ka tirsan dowlada Soomaaliya iyo fanaaniin.
Ku Simaha Raysal Wasaaraha Soomaaliya C/wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif oo ka
hadlay munaasabada ayaa wuxuu sheegay in xuriyada Soomaaliya ay dad badan u
dhinteen isla markaana aanan lagu helin ciyaar cyaar.
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo asna ka qaybgalay munaasabadaan ayaa wuxuu
shacabka Soomaaliyeed ugu hanbalyeeyay munaasabada 1 luuliyo.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in loo baahanyahay in gacan laga
geeso sidii looga bixi lahaa xaalada uu haatan ku jiro wadanka
Madaxweynaha ayaa u rajeeyay shacabka Soomaaliyeed in sanadkaan sanadkiisa kale uu ale ku
gaarsiiyo nadab iyo waliba barwaaqo iyo wadanka oo nabad ah.
Maamulka gobollka Hiiraan ayaa talaabo horay loo qaaday ku sheegay wada hadallada u
bilaawday mas’uuliyiinta dowladda KMG iyo Soomaaliland, kadib kulankii ugu
danbeeyay ee Dubai ku dhaxmaray madaxweyne Shariif iyo Axmed Siilaanyo
Afhayeenka maamulka gobollka Hiiraan Max’ed Nuur Caga-joof ayaa u sheegay HOL in wada
hadalladaasi yihiin kuwo sida uu hadalka u dhigay bilow ka ah midnimada
Soomaaliya, isaga oo ku amaanay labada madaxweyne wada hadallada
‘’Annaga ka maamul ahaan waan soo dhaweyneynaa wada hadalladaas, waayo waxaan u aragnaa
in ay yihiin kuwo gogol-xaar u noqon kara midnimada umadda Soomaaliyeed, gaar
ahaan waxaa ku amaaneynaa madaxweyne Shariif talaabada uu qaaday ee ah in wada
xaajood lala furo Soomaaliland.
Sidoo kale waxaa uu intaa ku darray Max’ed Nuur Caga-joof in wada hadalada socda
yihiin kuwo u suur-tagalin kara madaxweyne Shariif Shiikh Axmed in uu mar kale
dib u hanto xilka madaxtinimada Soomaaliya, maadaama loo baahan yahay
dhameystirka bilowga wada hadallada u dhaxeeya dowladda KMG iyo maamulka
‘’Aragtideena waxaa ay tahay in madaxweyne Shariif maadama uu yahay mas’uulka hadda ku jira
wada hadallada labada dhinac, in uu mar kale hanan karo xilka madaxtinimada
Soomaaliya si loo dhameystiro howlaha dhiman,’’ ayuu sheegay afhayeenka gobollka
Dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa iyaguna siweyn u hadal haya arinta ku
saabsan wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, kuwaasoo ay kuu sheegayaan
in ay ku soo beegmeen maalmaha xuriyada 26-ka Jun, iyo 1- Julay oo la filayo in
caawa loo dabaal dago.
MADAXWEYNE SHARIIF: "Somaliland Raalli-gelin ayaan u geynay wixii dhacayna waxaa mas'uul ka ahaa Maamul Jiray"
Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in maamulka Somaliland ay u
geeyeen ralligelin maadaama ay tabanayaan tacaddi horay loogu geystay, ayna ku
heshiiyeen in wadahadalladu ay sii socdaan.
Sheekh Shariif ayaa hadalkan jeediyay kaddib kulan uu Muqdisho kula yeeshay odayaasha
dhaqanka Soomaaliyeed, isagoo muujiyay inuu rajo weyn ka qabo inay wadahadallada
noqdaan kuwo mira-dhala.
"Walaalkaa haddii uu wax kaa tabto waxaa habboon inaad tiraado raalli ahow... waxaan u
geynnay raalli ahaada, wixii dhacay in laga wadahadlo ayaan ogol nahay, laakiin
nidaam jiray oo dhibaatadiisu cid walba gaartay ayaa ayaa mas'uul ka ahaa
arrintaas," ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Sidoo kale, madaxweyne Sheekh Shariif ayaa sheegay in Koonfurta Soomaaliya ay ka
dhaceen dhibaatooyin fara badan, isagoo xusay in kulankii dhacay la iskula
gaaray in la isi saamaxno, maadaama walaalo la yahay Soomaalina la yahay lana
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka dalbaday odayaasha dhaqanka inay
dedejiyaan xulidda ergooyinka ansixin lahaa dastuurka, isagoo xusay inay ka
go'an tahay in xilliga KMG ah lasoo gabagabeeyo 20-ka Ogoosto
"Howlo badan oo dowladda aad u qaban lahaydeen ama aad iskiin u qabsan lahaydeen ayaa
jira, waa inaad soo dedejisaan ergada ansixinta dastuurka iyo xildhibaannada
cusub si xilliga KMG ah loosoo afjaro," ayuu yiri madaxweyne Sheekh
Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu dalbaday in fursad la siiyo haweenka uu
damaca kaga jiro siyaasadda dalka, sidoo kalena aan lagu xad-gudbin tirada loo
Madaxweynaha DKMG Soomaaliya oo booqasho ku jooga degmada Balcad ee Gobolka Shabeellada Dhexe
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho
ku jooga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasoo toddobaadkii
hore ay ciidamada DKMG ah iyo kuwa AMISOM kala wareegeen Al-shabaab.
Booqashadan oo noqonaysa tii ugu horreysay oo madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ay ku jiraan
wasiirro iyo xidlhibaanno ayaa waxay ugu kuurgalayaan xaaladda ka jirta
degmadaas oo ay muddo sannado ah ka talinaysay Al-shabaab.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali ayaa booqday Balacad isla maalintii ay
ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa AMISOM gacanta ku dhigeen wuxuuna
ra'iisul wasaaruhu sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay horummarada ay
dowladda KMG ah ku tallaabsatay.
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa lagu wadaa inuu booqashadiisa uu ka hadli markii uu soo
gabagabeeyo, iyadoo degmadan ay noqonayso degmadii ugu horreysay ee ka tirsan
gobolka shabeellada dhexe oo ay ciidamada dowladdu qabsadaan.
Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada hoose oo ay ciidamada dowladdu ka qabsadeen
Al-shabaab dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ayaa waxaa laba jeer oo isku xigta
booqday madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo la xusuusto in markii uu soo dhameystay
booqashadiisii ugu horreysay ee Afgooye lagu weeraray deegaannadfa u dhexeeya
Afgooye iyo Muqdisho.
Kenya oo ku hanjanbtay in dhaqsi ay kusoo bad baadinayso shaqaale Samafal la afduubutay
Xukuumada Kenya ayaa sheegtay in Ciidamadooda kusugan Dalka Soomaaliya
ay kaqayb noqonayaan howlgalka lagu soo furanayo Shaqaale Samafal oo laga
afduubtay Shalay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Col. Cyrus Oguna oo ah Afhayeenka Ciidamada Milateriga Dalka Kenya ayaa ayaa Warbaahinta uxaqiijiyayay
in Shaqaalaga la afduubtay lala aaday dhanka Soomaaliya kuwaas oo marka la
afduubanayay kujiray howlahooda shaqo ee Caadiga ahaa.
Oguna ayaa waxuu Cadeeyay in Dadkaan ajaanibta ah ay ukala dhasheen dalalka Norway,Bakistaa
,Philippine iyo Canada,waxaana lagu Afduubtay meel banaanka hay’ada Dowlada
Norway ay kuleedahay halkaas.
Kooxohii afduubtay shaqaalaha ayaa waxay
dileen mid kamid ahaa Darawaladii Hay’ada midkalana dhaawac ayaa soo
Xuduuda Dalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa lasheegayaa in
Shalay ilaa maanta ay dul heehaabayaan Diyaaradaha Dalka Kenya oo baadi goob ugu
jira helitaanka dadka la afduubtay.
Afhayeenka Ciidamada Milateriga Dalka
Kenya dalka Kenya ayaa ku eedeeyay Masuuliyada afduubka inay kadam beeyeen
Gen Dhega Badan”Walaahi Anigaa dilaayo Askarigii Shacab Dhibeeto ugaysta”
Cabdi kariin Yuusuf Aadan Dhaga badan oo ah Abaanduulaha Ciidamada
Xooga Dalka Soomaaliyeed ayaa digniin kama dambays ah ujeediyay Askarta Dowlada
ee Shacabka dhibaateeya.
Gen. Dhaga badan ayaa Cadeeyay in Taliska
Militeriga Dowlada Soomaaliya uu san udul qaadan Doonini in Shacabka
Dhibaataysan ee Al-shabaab laga saaray in Dhib markale loo celiyo taas Dil ayaan
kaxignaa ayuu yiri.
Askarta Dowlada oo kaashanaya Ciidamada Midowga
Africa ayaa bilhii u dambeeyay isku baahiyay Gobolo katirsan Soomaaliya Sida
kuwaa jaarka la ah Muqdisho ee Gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Sh/hoose.
Tan iyo Markii Ciidamada ay gareen Goobaahaas waxaa jiray Mad madow iyo Cabasho
dadka shacabka kasoo yeerayay taas oo ku aadanayd Dhaca,Kufsi iyo Jirdilo inta
inay kula kacaan Ciidamada Dowlada.
Abaanduulaha oo Warbaahinta kula
hadlay Muqdisho ayaa kudhaartay in Askarigii qof shacab dhibaatanayo Ama dhacaya
hadaad aragtaan hala dilo ayuu ku amray Askarta kale ee Dowlada KMG
Arimahaan lagu eedaynayo Ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa
waxay soo baxeen Markii Ciidamada Dowlada ay lawareegeen deeganada Duleedka ee
Muqdisho iyo Degmada Afgooye oo lasheegay in Ciidamada gawaarida ay
kaqadanaayeen lacago baad ah.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa sheegay in
Muqdisho ay diyaar u tahay marti-gelinta shirka lagu ansixinayo dastuurka cusub
ee Soomaaliya, isagoo xusay in Muqdisho ay sharaf weyn u tahay in lagu dhiso
dowladdii labaad ee Soomaaliya marka laga soo tago dowladdii 19960-kii.
Duqa Muqdisho oo hadalka ka sheegay dibadbax ka dhacay Muqdisho, ayaa intaas ku daray
in hay'adaha ammaanka DKMG ah ay ka qayb-qaadan doonaan sugidda ammaanka
Muqdisho, isla markaana maamulkiisu uu bixinayo wax walba oo lagu fududeynayo
"Muqdisho waxay diyaar u tahay marti-geliso shirka ansixinta dastuurka cusub ee dalka uu
yeelanayo, waxay diyaar u tahay in 825-ka ergay ay marti-geliso, waana shir lagu
dhisayo Qarannimada Soomaaliya, umana hakan doonno dhaqaale Beesha Caalamka laga
sugayo," ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Sidoo kale, Tarsan wuxuu ku boorriyay haweenka gobolka Banaadir inay qaybtooda ka
qaataan sidii lagu sugi lahaa ammaanka Muqdisho, isagoo xusay in haweenku ay la
socon karaan dhaqdhaqaaqyada xaafadaha ay daggan yihiin.
Bisha soo socota ee Luuliyo ayaa lagu wadaa in la ansixiyo dastuurka cusub ee uu dalku
yeelanayo, kaasoo qayb ka ah howlaha Roadmap-ka, iyadoo dastuurku lagu
wareejiyay odayaaasha si ay talooyin uga soo bixiyaan.
Mas'uuliyiinta dowladda KMG ah ayaa waxay ka dalbadeen odayaasha dhaqanka ee ku shirsan
Muqdisho inay soo dedejiyaan xulidda ergooyinka ansixinta dastuurka, si looga
gudbo arrimaha dastuurka, iyadoo xukuumadduna ay magacowday guddi qayb ka
qaadanaya xulidda ergooyinka.
"Ergooyinka Ansixinta dastuurka waa imaan karaan Muqdisho, waxaana diyaar u nahay inaan soo
dhaweyno," ayuu yiri Tarsan oo sheegay inaysan in ammaanka la isku halleyn karo,
Muqdishona ay astaan u tahay Qarannimada Soomaaliya.
Dowladda KMG ah ayaa wuxuu xilligeedu ku eg-yahay bisha Ogoosto ee soo socota iyadoo lagu
wado in markaas uu dalku yeesho madaxweyne cusub uuna ka gudbo xilliga KMG ah,
iyadoo dastuurka la ansixinayo la sheegay wax ka bedel lagu sameynayo inta afti
dadweyne lagu ansixinayo.
Ururka Midowga Afrika iyo xukuumadda
Uganda ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo Kampala ay 140-askari oo
booliis ah ku geynayso magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya.
Howgalka ciidamadan booliiska ah ayaa wuxuu qayb ka noqonayaa howlgalka AMISOM oo
hoostaga Midowga Afrika, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay oo ciidammo ka
socda Midowga Afrika ay ka howlgalaan dal Afrikaan ah.
Golaha nabadgalyada ee Midowga Afrika ayaa bishii Jannaayo ee sannadkan isku raacay in
howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya lagu kordhiyo ciidammo booliis ah oo
qayb ka qaata sugidda nabadgalyada, iyadoo go'aankan ay ayideen golaha amaanka
ee Qaramada Midoobay bishii Feberaayo ee sannadkan.
Sidoo kale, waxaa socda tallaabooyin uu Midowga Afrika ku doonayo inuu heshiis kula
galo xukuumadda Nigeria sidii ay 140-askari oo booliis ah u geyn lahayd
Haatan Muqdisho waxaa ku sugan 60-askari oo booliis ah kuwaasoo ka socda ururka Midowga
Afrika, waxayna kaalin muhiim ah ka qaadanayaan dadaalka lagu dhisayo awoodda
ciidammada booliiska Soomaaliya, iyagoo siiyo talooyin iyo tababar lana socda
habka ay u shaqeynayaan.
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in ciidamada booliiska ah ee ka socda dalaka Uganda
iyo Nigeria loogu talogalay inay qayb ka qaataan xasilinta caasimadda dalka
Soomaaliya ee Muqdisho oo ah meesha ciidanka Midowga Afrika uu ka howlgalo,
kaddibna lagu fidin doono gobollada kale ee Soomaaliya.
Tallaabadan ciidamada booliis ah oo ka socda dalalka Afrikca lagu geynayo Muqdisho ayaa
wuxuu kusoo beegmayaa xilli ay ciidamada AMISOM horumarro ka sameynayaan
howgallada ay u joogaan Muqdisho.
Munaasabadda heshiiska lagu kala saxiixanayay oo ka dhacday xarunta Midowga Afrika ee Addis
Ababa ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil booliis oo ka socda hay'adda
booliiska caalamka ee INTERPOL.
Kulan looga Hadlayo Qadiyadaha Soomaaliya iyo Somaliland oo Shariif iyo Siilaanyo markale maanta Dubai ku yeelanaya
Madaxwaynaha Soomaaliya Shariif ayaa maanta lagu wadaa in Magaalada
Dubai markale uu kula kulmo Madaxwaynaha Maamulka Somaliland Axmad
Is Araga Labaad ee Shirka labada dhinac ayaa daba socda shir
Maalintii shalay ubilowaday waxaana lagu balansanyahay inuu kadhaco kulankaas
Hoteelka Shariif uu kadaganyahay Dubai.
Warerka aynu kahalayno Dubia ayaa
waxay sheegayaan in Kulanka ugu Weyn maanta uu dhexmarayo Shariif iyo Axmad
Maxamad Maxamuud Siilaanyo kaas oo lagu go’aamin doono Mustaqbalka Somaliland
iyo Somaliya sida uu ahaan doono.
Xuseen Carab Ciise oo ah Wasiirka
Gaashaan dhiga oo kusugan Dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa warbaahinta
usheegay in shirka maanta diirada lagu saari doono Qadiyadaha Soomaaliya iyo
Somaliland sidii loo xalin lahaa.
Shalay ayay ahayd kulan Is arag ah ay
kuyeesheen Magaalada Dubai Madaxwaynaha Soomaaliya iyo Somaliland kaas oo laga
soo saaray Afar qodob lakiin kulanka maanta ayaa ah Mid labada dhinac ay kahadli
Shirkaan ayaa Shariif waxaa lagu wadaa in
Madaxwaynah Somaliland uu kala hadlo lamidowga Soomaaliya iyadoo horay
Somaliland ay ushaacisay inaysan doonaynin in Soomaali ay kamid
Maamulka Somaliland oo faahfaahin ka bixiyey wadahadaladii Dubai ku dhexmaray Siilaanyo iyo Shiikh Shariif
Wasiirka arimaha dibeda ee maamulka
Somaliland Maxamed C/llaahi Cumar oo u waramayey laanta afka Soomaaliga ee
idaacada BBC-da ayaa sheegay iney guul ku dhamaadeen wadahadaladii maanta
magaalada Dubai ay ku yeesheen madaweynayaasha dowlada KMG Somalia Shariif
shiikh Axmed iyo kan maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Waxa uu sheegay wasiirku in kulanka labada madaxweyne ay iskula
soo qaadeen sidii loo sii ambaqaadi lahaa wadahadalada labada dhinac dhowaan uga
bilowday magaalada London ee dalka Ingiriiska loogana miro dhalin lahaa taasoo
uu sheegay iney isku afgarteen labada madaxweyne.
Labada madaxweyne kulanka dhexmaray wuxuu daba socday shirkii labo geesoodka ahaa ee dhowaan ka
dhacay London wey ku heshiiyeen qaabka wada hadalka, wayna ogolaadeen heshiiskii
lagu saxiixay shirkii London "ayuu yiri Dr. Maxamed C/llaahi Cumar.
"Sidoo kale labada madaxweyne waxay ku baaqeen in la sii wado wada hadalka bilowday
waxaa shirka ka soo qeyb galay Masuuliyiin carbeed oo ka socday dalka martida
loo ahaa ee Imaaraatka Carabta jawi farxad leh ayuuna ku dhamaaday kulankaas
"ayuu yiri sidoo kale wasiirka arimaha dibeda ee maamulka Somaliland.
Siyaasi Cismaacil hure Buubaa oo Kucanaantay Dowlada KMG in Somaliland ay kala hadasho Xaqiiqda Jirta
Siyaasiga Caanka ah ee Soomaaliyeed Cismaaciil hure (Buubaa) ayaa ugu
baaqay Dowlada Soomaaliya gaar ahaan Madaxwaynaha Soomaaliya Shariif Sheekh
Axmad inuu kahadlo Xaqiiqda jirta marka ay lashirayaan
Cismaaciil hure Buubaa ayaa kutilmaamay kulankii Madaxwayne
Shariif iyo Siilaanyo ay kuyeesheen Isutaga Imaaraadka Carabta uusan ahayn Shir
ee ay ahayd sheeko Xariir.
Siyaasiga waxuu ugu baaqay Dowlada Soomaaliya
inay cadayso Mowqifkeeda ah in sababaha ay ula shirayso Somaliland ay tahay
Sidii Somaliland ay ku iloowi lahayd inay noqoto Dal Madax banaan oo ay kamid
“Shirkii kadhacay Dubai ee Hadilmee shariif uu kala
qaatay Madaxwayanaha Somaliland runtii waxuu katarjumaa in labadoodaba ay
kabaqayaan inuu soo bandhigo shaqsi walba waxaa uu maanka kuhayo uuna
rumaysanyahay,lakiin meesha dadka Soomaaliyeed iyo Somaliland ay kasugaayeen
Natiijio lagu qanci karo waa ay kusheeko Xariireeyeen”ayuu yiri
Cismaaciil hure Buubaa ayaa ku eedeeyay Madaxda Somaliland iyo
Somaliya ay rabaan inay kala gooyaan Dadka reer waqooyiga iyo koonfurta hadii
aan muhiimada jirta laga hadlin.
Buubaa ayaa kucanaantay Dowlada KMG ah
inay kala hadasho Somaliland ujeedadeeda ah inay usocoto isu keenida Soomaaliya
Maxaa looga hadlay Shirki Khamiislaha ee Golaha Wasiirada
Golaha Wasiirada Dowladda Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shirkoodii caadiga ahaa
iyadoo shirkani uu guddoominayay Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada
Soomaaliya ahna Wasiirka Ganacsigga Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif,
waxaana shirkan looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ugu horeysay xoojinta Amniga
dalka, Arrimaha Roadmap-ka iyo Ergooyinka,Maxkamadaha iyo Hantida ma guurtada la
kala heysto iyo arrimo kale.
Ugu horeyntii Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa shirka waxaana laga
dhegeystay warbixin la xiriirta Amniga dalka iyo guulihii laga gaaray howlgaldii
ugu dambeeyay oo ay ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee ku
xureeyeyn degmada Balcad oo ka tirsan Gobalka Sh/Hoose iyo halka ay marayaan
howlaha Amni ee dalka.
“26,June, ayaa ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ku guuleystay iney gacanta ku
dhigaan degmada Balcad ee Gobalka Sh/Dhexe islamarkaana ay howlgaladada lagu
xureynayo dalka ay sii socon doonaan,Sidoo kale Gobaladii horey gacanta loogu
hayay iyagana waa lagu guuleystay in Amaankooda la sugo” islamarkaana la sii
wadi doono howlgalada”.
Sidoo kale Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka Axmed Xasan Gaboobe ayaa isna Golaha
Warbixin ka siiyay Wasaaradiisa, Wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in la
dhiso Maxkamad u qaas ah sidii loo soo celin lahaa Hantida la kala heysto
islamarkaana ay Wasaaradiisa ku mashquulsan tahay sidii loo dhameystiri lahaa
wax ka qabashada Arrimaha Cadaaladda.
Ugu dambeyntii Goluhu wuxuu soo dhaweeyay Nuqulkii ugu dambeeyay ee Dastuurka
dalka,kaasoo loo qeybiyaya Odoyaasha Dhaqanka Soomaaliyeed,Islamarkaana Shacabka
Soomaaliyeed loo marsiiyay qeybaha kala duwan ee Warbaahinta.
Madaxwayne Cabdiraxmaan Faroole oo Cambareeyay Shirkii Shariif iyo Siilaanyo kuna tilmaamay Shirka Danaystayaasha.
Madaxwayne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamad Faroole ayaa kasoo horjeestay
Qodobadii kasoo baxay shirkii Dubia ee ay isku raaceen Madaxwayne Shariif iyo
Cabdiraxmaan Sheekh Maxamad Faroole Madaxwaynaha Maamulka
Puntland ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan Puntland waxyaabihii kasoo baxay
Mar uu uwaramaya Bbcda Faroole ayaa Si cad uqeexay in
Puntland aysan raac saneen Shir aysan iyada kujirin,Shirkii Shariif iyo
Siilaanyana labadooda ayuu ugaar ahaa anaga wax naga quseeyay Majirin ayuu yiri
Mar lawaydiiyay Madaxwaynaha waxaa uu kala
socday kulanka Shariif iyo Siilaanyo ayuu sheegay in Mar Shariif ay kawada
hadleen kulankaas lakiin markii shirkii uu bilowday isbadal ayuu keenay Shariif
Madaxwaynaha Puntland ayaa ku cambaareeyay Shirkii Dubai
kadhacay ee ay kuwada hadleen Shariif iyo Siilaanyo in aan looga hadlin wax dan
u ah Umada Soomaaliyeed inay isku yimaadaan lakiin dano gaar ah ayay ugu hadleen
waxaana uu yiri
‘’labadooba dantooda ayay u ordayeen Shacabna uma Socdaan ee
Shariif waxa kujira olalaha doorashada Soomaaliya kadhaci doonta oo waxaa uu
samaynayaa waxyaabo badan oo dib ugu soo noqon karo kursiga Madaxwayne’Axmad
Siilaanyo isago dantiisa waxay tahay Gooni isutaag’ayuu yiri Madaxwayne
Mar lawaydiiyay Madaxwaynaha Puntland inay is arkeen
Siilaanyo ayuu sheegay in hal mar ay is arkeen isna gacan qaadeen.
Ugu dambayn Cabdiraxmaan Faroole ayaa kumicneyay kulankii Dubai in looga hadlin
ujeedada ugu muhiimsanayd ee ah in Soomaali lamideeyo lakiin madhicin buu yiri
oo dano gaar ah ayay kushireen.
Madaxwayne Shariif iyo Siilaanyo oo heshiis kukala saxiixday Dubai.
Madaxwaynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmad ayaa maanta kulan kula qaatay Magaalada Dubai Madaxwaynaha Maamulka Somaliland Axmad Maxamad Maxamuud Siilaanyo.
Shirka oo mudo saacado socday ayaa waxaa labada Dhinac ay kaga hadleen Arimo ay kamid yihiin Xoojinta wadahaladii Shirkii 21 kii juun iyo kii 22 ka bishan aynu kujirno ee wadahadalka.
Shariif sheekh Axmad ayaa waxaa kulankan kuwehlinayay Wasiirka gaashan dhiga Xuseen Carab Ciise,halka Madaxwaynaha Maamulka Somaliland Siilaanyana uu ay shirka ay ugu wada qaybgaleen Daahir Riyaala Kaahin,iyo Faysal Cali Waraabe.
Afar qodob ayay kasoo saareen labada Madaxwayne Shirkooda kuwaas oo ay kamid ahaayeen ,in lasii wado wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland,In laysku xiro ganacsiga labada dhinac,in lala dagaalo Burcad badeeda,iyo in labada madaxwayn ay dar darb geliyaan kulama dooda.
Shariif iyo Siilaanyo ayaa isku gacan qaaday Shirka lakiin marka laga soo tago qodobada ay isku raaceen waxay kukula aragti duwanayeen Qudbadihii bilowga Shirka ay ka jeediyeen.
Axmad Siilaanyo ayaa sheegay in Somaliland aysan kanoqanayn dadaalka ay kudoonayso inay noqoto dowlada madaxbanaan isagoo kacodsaday Beesha Caalamka in Somaliland lasiiyo Madaxbanaanideeda.
Sidoon kale dowlada Soomaliya ayuu ugu baaqay inay tageerto gooni isutaaga Somaliland.
Madaxwayne Shariif oo goobta isagana kahadlay ayaa sheegay inuu kufaraxsanyahay Wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland.
Shirkaan Dubai ay kuyeesheen Madaxda Somaliland iyo Soomaaliya ayaa waxaa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ay isaga hor yimaadaan lakiin Natiijada shirka kasoobaxday ayanan ahayd wax kucusub dhagaha Shacabka.
Shirka Dubai ee Arimaha Burcad badeeda oo Soomaaliya loogu deeqay Hal Milyan oo Doolar
Dowlada imaaraadka Carabta ayaa soomaaliya ugu deeqday lacago ay ugu hortagayaan Dagaalka looga soo horjeedo kooxaha Burcad badeeda Soomaalida.
Hal Milyan oo lacagta Doolarka Mareykanka ayaa dowlada Imaaradka waxay sheegtay inay ugu deeqayso Soomaaliya si loogu dhiso Ciidamo ilaaliya Xeebaha Soomaaliya.
Shaikh Cabdullah bin Zayed Al Nahyan oo ah Wasiirka Arimaha Dibada ii isutaga Imaaraadka Carabta ayaa inta uu socday Shirka Burcad badeeda looga hadlayo ayaa waxuu sheegay in dowladiisa ay bixinayso 1 Milyan oo doolarka Mareykanka taas oo uu sheegay in lagu Caawinayo Soomaaliya si loogu dhiso Ciidamo Badaha ilaaliya oo ka hortaga Burcad badeeda.
Dowladda imaaraadka carabta oo shirka martigalisay ayaa sheegtay in afartii sano ee la soo dhaafay ay ku deeqday kaalmada la siinayo Soomaaliya lacag ka badan 25-milyan oo dollarka Mareekanka, taas oo diirada lagu saaray arrimaha bini'aadinimada gaar ahaan caafimaadka.
Inta uu socday Shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay Lacagta kooxaha Burcad badeeda kaheleen Marakiibta ay afduubtaan taas oo lagu qiyasay Aduun lacag oo gaarayo 160-milyan oo madax furasho uheleen.
Shirka looga hadlayo Burcad badeeda ee kasoconaya Dubai ayaa lagu wadaa in maanta lasoo gaba gabeeyo .
Ciidamada DKMG ah ayaa maanta ka sameeyay howgallo ay kusoo qabqabteen dhallinyaro badan ka sameeyay degmada Huriwaa ee gobolka Banaadir, kaddib markii xalay la weeraray guriga guddoomiyaha iyo saldhigga degmadaas.
Ciiddamada Laanta socdaalka ee Madaarka Diyaaraddaha ee Magaaladda Berbera ayaa sheegay inay qabteen 12 Caruur ah oo laga keenay Koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo la socday Diyaarada ka soo kicitimtay Magaaladda Muqdisho.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland oo ku kulmay Magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta
Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa kulan ku yeeshay maanta magaalada Dubai ee dalka Imaaaraadka Carabta, iyadoo labada mas'uul ay hadallo jeediyeen.
Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya waxaa ay goob colaadeed ahayd muddo ka badan labaatameeyo sano, waxaana dadkii ku dhaqnaa gudaheeda ay dantu ku qasabtay in ay isaga cararaan, si ay naftooda amaan ugu helaan. Dad badan oo ka mid ah kuwa qaxay waxaa ay rejo ka qabeen in ay mar uun dib ugu soo laaban doonaan guryahoodi ay Muqdisho ka daganaayeen, hase ahaatee taasi ma suuro’galin, sababta oo ah qaska iyo rabshadda colaadda oo waqti dheer qaadatay awgeed.
Isla waqtigaan Soomaalida qurbe joogta ah waxaa ay aaminsan yihiin in ay kaalin muuqata ku yeelan’karaan dadaalada lagu soo celinayo mustaqbalka Soomaaliya, iyagoo cuskanaya in ay xambaarsan yihiin ilbaxnimo, aqoon iyo xirfado ay kala tagayaan wadamada horumaray ee ay ku nool yihiin, waxaana mudooyinkii ugu dambeeyey ay dibad joogta Soomaalidu door lixaad leh ku lahaayeen siyaasada gudaha iyo dibada ee wadanka Soomaaliya, iyadoona qaarkood ay xubno firfircoon ka noqdeen xukumadihii kala dambeeyey iyo maamul-goboleedyada dalka ka jira. Halka qaarkoodna ay sameysteen xisbiyo, si ay mustaqbal ugu galaan gorgortan siyaasadeed, islamarkaasna ay uga mid noqdaan isbadalka cusub ee rejadiisu tahay in uu Soomaaliya ka hana’ qaado waqtiga soo socda
Ciidamada Hiil ee kasocda Dalka Jabuuti oo Soomaaliya lakeenayo dhawaan
Ciidamo dheeri ah oo kasocda Dalka Jabuuti ayaa lagu wadaa in Soomaaliya ay yimaadaan kuna biiraan howlgalka Amisom ee lagu tageerayo Xukuumada KMG Soomaaliya.
Dowlada Jabuuti ayaa sheegtay inay kor uqaadayso Tageerada ay siinayso Dowlada KMG Soomaaliya oo lugaha kala soo baxaysa markaan dhiiqadii ay kula jirtay laguha ee dhanka Amaanka ahaa.
Madaxwaynaha dowlada jabuuti Cismaaciil Cumar geele ayaa kudhawaaqay isagoo kahadlayay xafladii munaasaada maalinta Xuriyada Jabuuti ay kaqateen Faransiiska ayaa sheegay in Dowlada soomaaliya ay yihiin walaalo ayna kutageeri doonto waxii karaan keeda ah.
Cismaaciil Cumar geele ayaa Xaflada kasheegay in Soomaaliya ay u dirayaan Ciidamo kale oo kubiiraya howlgalka Amisom isagoo sheegay in Ciidamadaas lagu magacaabo Hiil oo uu kumicneeyay inay utaaganyihiin Walalahooda Soomaaliyeed Caawintooda.
Ilaa Sideed boqol oo Askari ayaa Dowlada Jabuuti kajooga Soomaaliya oo hada kahowlgalaya Magaalad Beledwayne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Muqdisho waxaa shalay kadhacay Munaasabada Xuska 35 naad ee kasoo wareegatay Markii Jabuuti ay kaxorowday Faransiiska.
Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadal ka jeediyay shir looga hadlayo arrimaha burcadbadeedda ayaa ka sheegay in dowladdiisu ay muddo sannad ah ku cirib-tirayso burcadbadeedda haddii la siiyo taageerada ay u baahan yihiin.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey magaalada Kampala.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa si heer saro ah loogu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Kampala.
Shabaab oo sheegay in Itoobiyaan ay kuxasuuqeen deegaanka Goof-Gaduud
Al-shabaab ayaa sheegay in Ciidamo Itoobiyaan ah ay kulaayeen dagaal Xoogan oo kadhacay deegaan lagu Magacaabo Goof-guduud oo ah deegaan hoostaga Baydhabo.
Afhayeenka Al-shabaab uqaabilsan Dagaalada Cabdul Casiis Abuu Muscab oo dagaalka kahadlay ayaa sheegay in dagaal ay kuqadeen Gawaari ay lasocdeen Ciidamada Itoobiya kaas oo kadhacay inta udhaxaysa Goof-gaduud iyo Baydhabo.
Abuu Muscab waxuu sheegay in kaminkii ama weerarkii ay kuqadeen Ciidamada Itoobiya uu ufulay sidii ay mujaahidiinta ay uqorsheeyeen Sida uu hadalka udhigay.
‘’ ilaah fadligii kamiinadaas Mujaahidinta waa ay kaga guulaysteen Amxaarida oo waxaan kudilnay 30 Askartooda katirsan,maydkoodana horay ayay iyagoo dhaawac ah uqaaten ayuu yiri Abuu Muscab.
Sheegashada Al-shabaab ee ku aadan inay dileen 30 Katirsan Ciidamda Itoobiyo majirto wax war ah oo kasoo baxay Sarakiishooda dhinaca howlgalada ee Itoobiya.
Sarakiisha Dowlada oo arimahaas inay wax kajiraan ay warbaahinta waydiisay ayaa sheegay inay waxba kamajiraan yihiin oo iyaga ay dagaalka ay kudileen Sadax katirsan Al-shabaab.